UMaría Dueñas: iincwadi | Uncwadi lwangoku
UMaría Dueñas: iincwadi
Ibinzana likaMaría Dueñas.
UMaría Dueñas ngumbhali waseSpain owaziwayo kwicandelo lokubhala ngenxa yencwadi yakhe yokuqala, inoveli yezembali: Ixesha phakathi kwemisonto (2009) -imisebenzi ethengisa kakhulu kule minyaka ilishumi idlulileyo-. Ngale ngxelo, umbhali uphumelele amabhaso: ICiudad de Cartagena de Novela Histórica (2010) kunye neCultura (2011), kudidi loNcwadi.
Lo 2021, u-Dueñas ubuyile ngaphambili kunye nesavenge sakhe esitsha: Sira, ulandelelwano lwedabi lakhe lokuqala. Inika ukuqhubeka kubomi bengubo yokunxiba uSira Quiroga, ngoku umdala ngakumbi kwaye unezinye iimbono. Ngeenyanga nje ezimbalwa zokuphehlelelwa, le noveli ithatha indawo yokuqala kuluhlu lwe umthengisi ogqibelele eSpain nakwihlabathi liphela; ngokungathandabuzekiyo enye impumelelo entsha yenoveli yaseSpain.
1.1 Izifundo kunye namava omsebenzi
1.3 Iincwadi zikaMaría Dueñas
1.4 Ubomi bomntu
2 Amagqabantshintshi eenoveli zikaMaría Dueñas
2.1 Ixesha eliphakathi kwamaSeams (2009)
2.2 Ukuthotyelwa kweMishini (2012)
2.3 Ubushushu (2015)
2.4 Iintombi zeCaptain (2018)
2.5 USira (2021)
UMaría Dueñas Vinuesa weza emhlabeni ngo-1964, kwisixeko sasePuertollano eSpain. Kubantwana basekhaya abasibhozo, wayelizibulo; Umama wakhe: UAna María Vinuesa —utitshala—; Uyise: uqoqosho u-Pablo Dueñas Samper. Umbhali Uyavuma ukuba wayenobuntwana obuqhelekileyo kunye nobonwabisayo nosapho, apho wayefunda khona kakhulu kwaye kuyo, ukongeza, enkosi ekubeni kungoyena mdala, ubeyinkokeli yokuzalwa.
Izifundo kunye namava omsebenzi
Wagqiba izifundo zakhe zobungcali kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid, apho waphumelela kwisiNgesi Philology; Umsebenzi awathi kamva wenza ugqirha. Iiklasi ezifundisiweyo ngaphezulu kwamashumi amabini eminyaka kwiFakhalthi yeeleta zeDyunivesithi yaseMurcia nakumaziko aliqela emfundo aseMelika; umsebenzi awushiyileyo emva kokupapashwa kwinoveli yakhe yokuqala.
Kwi 2009, umbhali yavela kumhlaba woncwadi nge Ixesha phakathi kwemisontoInoveli ebengezelele abafundi abangaphezu kwezigidi ezingama-25 kwihlabathi liphela. Le ngxelo yazisa iSpanish ukuba ibekho; impumelelo igqityiwe kungekudala emva koko ukuziqhelanisa nale fomathi ngokulandelelana ngejelo UAntena 3. Zombini iincwadi kunye nenkqubo yeTV yaguqulelwa kwiilwimi ezininzi.
Emva kokwenza indlela yakhe ngomsebenzi wakhe wokuqala, iSpanish ipapashe inoveli entsha rhoqo kwiminyaka emithathu, apho athe wakwazi ukudibanisa umsebenzi wakhe. Phakathi kwezi zinto zibalulekileyo: Ubushushu (2015), eyayiyinkokeli kwezentengiso ngonyaka wokumiliselwa kwayo. Ukongeza, yahlengahlengiswa kuthotho lweTV ngo I-boomerang tv kwaye yaqala ngo-2021 ngeqonga lokusasaza iAmazon Prime Video.
Iincwadi zikaMaría Dueñas
Ixesha phakathi kwemisonto (2009)
Umbono ulibale (2012)
Iintombi zikaKapteni (2018)
Umbhali utshatile noManuel Ballesteros —ICathhedral yesiLatin—; Isiqhamo somtshato wakho Banabantwana ababini: uJaime noBarbarara. Kwiminyaka ethile edlulileyo - ngenxa yomsebenzi womyeni wakhe - bafudukela kwisixeko saseSpain iCagagena, apho kuhlala khona usapho ngoku.
Amagqabantshintshi eenoveli zikaMaría Dueñas
USira ngumthungi oselula, Quien, baqaqanjiswa luthando olutsha, ubaleka Ukusuka eMadrid ukuya phambili isixeko esihombisa kakhulu Tangier. KodwaUmlingo awuhlali ixesha elide akukho nto yayilindelwe. Ngesi sizathu, egcwele amatyala angaphandle, uthatha isigqibo sokuya eTetouan, ikomkhulu lomkhuseli waseMoroccan. Ngamaqhina kunye nonxibelelwano olunomthunzi, uvula i-atelier ekhethekileyo; Apho uya kuya kubafazi ababalulekileyo nabangaziwayo.
Yonke into iyenzeka ngexesha ixesha leemfazwe ezininzi eYurophu, ke uSira ukudibana nabantu Isalathiso kwimbali. Phakathi kwabo, umphathiswa kaFranco uJuan Luis Beigbeder, u-Rosalinda Fox kunye nomphathi wobukrelekrele baseNgesi u-Alan Hillgarth Bonke baya kukhokela lo mfazi wesinxibo usendleleni emnyama kwaye iyingozi, enendawo yokusebenzela yokuthunga.
Ixesha eliphakathi kwemisonto ...
UNjingalwazi Blanca Perea Emva kokulahlwa ngumyeni wakhe- uhamba nelinye lawona maxesha amabi ebomini bakhe. Njengokuphela kokuphuma kwimeko yakhe yokudinwa, uyakwamkela ithuba lokwenza umsebenzi wokufunda kumhlaba waseMelika. Yileyo ndlela ifika kwiYunivesithi encinci yaseSanta Cecilia, eKhalifoniya. Indawo entsha ene-aura enoxolo kwaye inomdla ngakumbi kunokuba ebecinga.
UBlanca uza kuqala umsebenzi wakhe: amaxwebhu elifa lomntu asebenza naye kunye nelinye ilizwe u-Andrés Fontana, owayesengumntu wase-Hispanic owayedingisiwe emva kweMfazwe yamakhaya. Kolu phando kuya kusebenzisana owayesakuba ngumfundi kaFontana, uyathandeka UDaniel carter. Njengoko iprojekthi iqhubeka, izinto ezingaziwayo eziqhotyoshelwe kwiimvakalelo ezininzi ezixubeneyo ziya kukhula.
Ukuhamba phakathi kwexesha elidlulileyo leemfazwe, ekuthinjweni kunye nabalinganiswa abangalibalekiyo, iya kuzisa iimpendulo ezimangalisayo ezichaphazela okwangoku.
[(Umsebenzi wokuThintela)] [Ngu ...
Kwisiqingatha sesibini senkulungwane ye-XNUMX, umgadi-mgodi uMauro Larrea ulahlekelwe bubutyebi bakhe bonke, awayeyikrola ngamandla eMexico. Ugcwele amatyala kwaye ujonge ukuvuka ukuze aqinisekise ikamva labantwana bakhe, ubeka emngciphekweni into encinci anayo kuhambo oluchumileyo lwaseHavana. Apho, ukubetha ngethamsanqa ngethamsanqa kuya kumenza abuyele kwilizwe lakhe, kodwa ngeli xesha lokuhlala kwisixeko saseJerez.
Ukuhlala okutsha komhlolokazi uMauro akuyi kuba lula njengoko wayecinga, uyakufumana imiqobo kwinto awayekholelwa ukuba sisiqalo esitsha soloyiso. Uya kudibana noSoledad Montalvo, Umfazi onomdla kwaye otshatileyo, oya kuthi enze nzima zonke izicwangciso zakho. Ukusuka apho, uthotho lweenguqu luya kwenzeka phakathi kwezidiliya, uloyiso, ilahleko, ukuthanda, ubunzima bosapho kunye nesibindi.
Ngo-1936, uEmilio Arenas —Umphambukeli waseSpain— useNew York ekhangela ubomi obungcono kusapho lwakhe, abaseseSpain enengxaki. Kungekudala, qala indawo yokutyela encinci "El Capitan", evumela ukuba eze nenkosikazi yakhe uRemedios kunye neentombi zakhe: UMona, uVictoria noLuz. Banika umama wabo umlo, kuba benqabile ukutshintsha amazwekazi; kodwa ekugqibeleni baqala.
Emva kwelishwa elingalindelekanga, ubomi babatsha buya kutshintsha ngaphaya kwenkolelo. Iintombi ezikrwada zikaEmilio Kufuneka banakekele u-El Capitan, Ngelixa belinde imbuyekezo emnandi. La mabhinqa aselula kuya kufuneka aqole kwaye alwele ilifa losapho, ejikelezwe sisaqhwithi songquzulwano. Iingxaki zolwimi nezezezimali ziya kuba yinxalenye yazo, kodwa isibindi sabo siya kuba sikhulu ngakumbi.
Iintombi zikaKapteni ...
Ha Imfazwe yesibini yeHlabathi edlulileyo, Zonke IYurophu iqala ukuzalwa ngokutsha Njengentaka ye-fenix kwaye, ecaleni kwakhe, uSira Bonnard, onqwenela ubomi obutsha, obunoxolo ngakumbi. Kodwa, akukho nto iya kuba lulaNgequbuliso inyani yakhe iyatshintsha kwakhona, enyanzelwa ukuba alwe ngokuqatha ngekamva elingcono. Umfutho wakhe awuzukuchaphazeleka, njengoko ebesoloko engumfazi onobukroti, okhaliphileyo nonyamezelayo.
Ngezizathu zomsebenzi, USira kuya kufuneka ahambe imimandla eliqela, njenge: IPalestine, iNgilani neMorocco. Amava akhe amatsha aya kumenza abaleke kubalinganiswa be-iconic, abaya kumchaphazela ngokuthe ngqo. Endleleni yakho dibana nenxalenye ye-elite yexesha, njengo-Eva Perón kunye noBárbara Hutton. Inqanaba elahlukileyo likaSira, ligcwele zizibophelelo ezinkulu, azithathayo ngaphandle kokuphulukana nobunzima bakhe.
I-SIRA (Ababhali baseSpain ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UMaría Dueñas: iincwadi